Xasuuqii Xeebta Jasiira - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Xasuuqii Xeebta Jasiira
By Mohamed Sharmaake Taxanaha Soomaali waa walaalo, Q. 7aad
Si kedis ah oo argagax leh ayay saqdii dhexe abbaaro 1:00 habeennimo albaabkii guriga noogu soo tumeen askar hubeysan oo ka mid ah Ciidankii dawladda. Nin naga mid ahaa ayaa toosay, waxa aanu damcay inuu furo albaabkii ay askartu garaacaysay.
Waxa dayrka soo fuulay askari, kaasi oo qorigii ku qabtay, kuna qasbay inuu albaabka furo, bal se ninkii wuxuu damcay in uu weydiiyo masuulkii guriga lahaa oo ahaa Cabdirisaaq Caydiid in uu furo albaabka iyo in kale.
Cabdirisaaq oo shanqadha maqlayay ayaa markaas soo kacay, isaga oo daaradda maraya ayay isna qorigii ku qabteen oo ay yidhaadeen ‘albaabka fura’. Sidaas ayaana albaabkii lagaga furay askartii.
Magacaygu waa Cumar Muuse Mire (Cawil). Sannadkii 1989-kii waxaan ku noolaa oo aan degganaa Muqdisho, gaar ahaan degmada Madiina, Xaafada Buullo-Xuubay. Da’daydu waxay ahayd 26 jir, waxaanan dhigan jiray Machadka maamulka iyo maaraynta ee Muqdisho.
Gelinkii dambe ee 17-kii Julaay 1989-kii, goor hore ayaan u carraabay gurigii aan degganaa, maadaama oo ay magaaladu bandoo ahayd maalmahaasi.
Intii aan sii socday ayaan jidadka iyo isgoysyada ku sii arkayey gaadiidka ciidanka dawladda iyo askar hubaysan oo meelo door ah taagtaagan iyo kuwo gaaf-wareegaya xaafadaha dhexdooda, waxaanan u fahmay hawlgalkii bandooga.
Waxaan tagay gurigii aan degganaa oo ay ku sugan yihiin dhammaan dadkii guriga ku noolaa, yar iyo weyn, rag iyo dumar intuba.
Waxaanu guriga ku joognay shan rag ah iyo afar dumar ah. Markii aannu waxoogaa ku caweynay gudaha guriga ee uu qof waliba dhammeystay hawlihiisii, ayaannu dhammaantayo u seexannay si nabad ah, bal se nasiibdarro saqdii dhexe ayay askartii dawladdu albaabka nagu soo tuntay, ugu dambayna waanu ka furnay.
Waxaa gurigii gudaha u soo galay shan askari oo hubaysan oo sitay qoryaha AK-47. Kolkaas ka hor anigu Cumar ahaan waxaan galay suuliga oo aan is idhi ku dhuumo. Askartii qol-qol ayey u baadheen oo ay u soo kiciyeen dadkii hurdey, dabadeed waxaan is idhi bal eeg waxa ay samaynayaan. Nasiib-darro waxaan lugta ku dhuftay daasado meel ku rasaysnaa oo soo daatay, shanqadhii ayay maqleen askartii.
Mid ka mida askartii ayaa dib iigu soo jeestay oo qorigii intuu cabbeeyay dhinacayga ku soo qabtey, waxaanu yidhi; ‘yaa meesha ku jira? Waxaan idhi ‘annigaa ku jira.’ Ka dibna waxa uu igu yidhi ‘soo bax’
Markii aan soo baxay askarigii xagga daaradda ayuu ii riixay, waxaanan arkey in guriga wixii rag joogay oo dhan daaradda loo soo wada saaray oo lagu ururiyay.
Waxaa nagu jiray nin da’diisu weyn tahay oo la odhan jiray Saxardiid Yaasiin Xaaji Cabsiiye oo naafo ahaa, kuna boodayay laba qori oo xilligaas ka yimid Dhakhtar dibedeed. Askartii ayaa yidhi; ‘kan innaga daaya dumarka ha la joogee, intayadii kalena dibedda ayey gurigii nooga saareen.
Sidaas ayaannu kaga tagnay oo afartayadii kalena waxay na geeyeen meel qiyaas ahaan 30 tallaabo u jirta gurigayagii oo ay rag badan ku ururiyeen oo ay taagnaayeen baabuurtii Millateriga iyo Askar tiro badan oo tuute gashanaa, isla markaanna raggii la soo ururiyay ee guryahooda lagala soo baxay ayaa loo fadhiisiiyey saf-saf midkiiba ka kooban yahay shan nin oo is daba fadhiya.
Dadka qaar way feedho-qaawanaayeen, iyada oo qof kasta lagu amray inuu madaxiisa dhex geliyo labadiisa jilib, iyaga oo ay waliba askartu garaacayaan, sigaarkana ku bakhtiinayaan.
Qaar askarta ka mid ah ayaa nagu garaacay qoriga dabadiisa, iyada oo aan waxba nala weydiin ayaa dadkii nala dhex fadhiisiyay oo sidii ay u fadhiyeen ayay yidhaahdeen u fadhiista.
Mid askarta ka mid ah ayaa tirinayay mar kasta oo dad cusub nalagu soo biiriyo. Markii aannu waxoogaa fadhinnay ayaa askarigii lagu yidhi; ‘tiri’, waxaanu yidhi; ‘taliye waa 57 qof.’ Ka dibna waxa ninkii taliyaha ahaa yidhi; ‘saara gaadhiga.’
Gaadhi ciidan oo weyn ayaa nala saaray oo ah kuwa xamuulka qaada ee loo yaqaan Bagaase, waxaana soo fuulay askartii na ilaalinaysay, askarta intoodii kalena waxay fuuleen gaadhi kale oo la mid ah ka nala saaray, waxa kale oo la socday gaadhi Toyota ah oo uu saaran yahay qori Baroon ahi.
Waxa na loo dhaqaajiyay xagga Koonfurta magaalada Muqdisho, oo ku aaddan Masnaca Sifaynta Baatroolka. Markaannu woxoogaa sii soconaynay ayaannu ka weecannay waddadii laamiga ahayd ee aannu maraynay, waxaana nala mariyey waddo raf ah oo u leexatey dhinaca badda.
Halkaas kolkaanu marayno ayaa nin oday ah oo agtayda fadhiyey yidhi; ‘waxaan u malayn in la inna laynayo. Waayo halka aynu ku soconno kuma yaallo Jeel, haddii uu Jeel ku yaallo waddo ayaa tegi lahayd ee raf ma ay ahaateen”. Isla markaas waxa ooyay ilmo yar oo aan ku qiyaasay illaa 13 jir oo gacan ka jabnaa oo na dul-taaganaa, waan aammusiiyay, waanan fadhiisiyay.
Waxaannu gaadhnay badda dhinaceeda oo ahayd meel bacaad badan oo tuulan leh, markaasi ayay askartii gaadhigii ka degeen iyaga oo isku qaybiyay laba qaybood: qaar gaadhiga ku wareegay, iyo qaar ku soo istaagay ciid tuulnayd.
Askartii fuushay Buurtii ciidda ahayd gaadhigii yaraa ee ay wateen waxa loo kaxeeyay xaggaasi, markii aannu woxoogaa joognay ayay noo yimaaddeen askar ku dhawaaqaysa fura albaabada, taasoo aan u maleeyay inay doonayaan si aannaan u kala yaacin ee aannu u moodno in jeel na la gelinayo.
Marakas ayaa annagana gaadhigii nalaga soo rogay, dhulkaana nalagu ururiyay.
Markii aannu dhammaantayo ka soo degnay gaadhigii, ayay askartii dabada na ga kaxeeyeen, iyaga oo qaarkoodna ay dhinacyada naga raaceen. Waxaanay na fadhiisiyeen dusha sare ee buurtii ciidda ahayd.
Shantii qofba mar ayay hoos uga dhaadhicinayeen (buurta) iyaga oo u kaxaynayay dhinaca qorrax u dhaca. Waxay ahayd meel mugdi ah oo aan waxba laga arkayn, markaasi anigu maan maqlayn shanqadh rasaaseed iyo cod kale toona, waxaanan u maleeyay inay dadka gawracayaan. Isla markaas ayaanu bilownay xushxush, qaarkayo way ducaysteen, qaar way ashahaateen.. Laa ilaaha ilaalaah….qaar kalena way tasbiixsadeen.
1. Somaliland Democracy Watch Organization – SDWO.com
2. BBC-da, laanteeda afka Soomaaliga
3. Waraysiyo kala duwan oo lala yeeshay Cumar Muuse Mire oo ah qofka qudha ee ka bedbaaday xasuuqaas, ahaana isla qofkii dunida gaadhsiiyay.
4. Wargeyska Geeska Afrika
7. Wargeyska Ogaal
8. Shabakadda Ramaasnews